Ikhalenda le-Lunar lokuhlwanyela ngoJanuwari 2017: ithebula lezinsuku ezihle zokuhlwanyela utamatisi nezithombo ngabagadi nabalimi
Ebusika ezindaweni ezisenyakatho izitshalo eziningi zilala kahle. Kodwa lokhu akusona isizathu sokuthi bangabanikazi nabalimi. Ekupheleni kukaDisemba, kubalulekile ukubuyekezwa wonke amasheya wonyaka odlule, ukuwahlunga nokulahla ama-spoiled. NgoJanuwari, ungaqala imbewu yokutshala izithombo: ku-abamba ukufudumala okufudumayo noma efesiteleni endaweni ekhululekile. Ukuze singadideki ekuqaleni kwemisebenzi yonyaka, sincoma ukusebenzisa ikhalenda yokuhlwanyiswa kwenyanga ngoJanuwari 2017 kubalimi. Ithebula lihlanganiswa ngokucabangela izici ezibalulekile zomjikelezo wenyanga kanye nokuhamba okuhlelekile kokukhanya kwebusuku eceleni kwezibonakaliso zezinkanyezi. Akusekho isidingo sokusebenzisa izindlela zesikhathi esidlule ukubala izinsuku ezihle nezinhle. Kwanele ukunquma usuku futhi unqume imisebenzi enhle yalolu suku. Kuphela ngenxa yekhalenda lokuhlwanyela ungakwazi yini ukucacisa kahle uma kungcono ukuhlwanyela utamatisi, ukhukhamba nezinye izitshalo ezitshalweni.
Ikhalenda le-Lunar lokuhlwanyela ngoJanuwari 2017 - izinsuku ezihle futhi ezingathandeki
UJanuwari yisiqalo esingaqiniseki sonyaka we-horticultural. Phakathi nalesi sikhathi kungenzeka ukwazi ukulungisa isayithi, ukususa inhlabathi eqhweni, ukuhlelela izithombo, ukuhlela uhlelo lokutshala nokufunda izincwadi eziningi ezithakazelisayo neziwusizo mayelana nokulima kanye nokulima. Ungaphuthelwa nokukhathazeka okusebenzayo - ukuklanywa kwembewu, ukuchelela izitshalo zasendlini, ukuvikelwa ezifweni nasezinambuzane, njll. Ekuqaleni kukaJanuwari, ungakwazi ukutshala izitshalo ezitshalwe ku-abamba ukushisa, unikeze ukukhanya kwekhwalithi amahlumela esizayo kanye nama-sunrises asevele ekhona. Phakathi nenyanga kuyakulungeka ukwakha uhlelo oluqondile lwezitshalo zesikhathi esizayo kanye nokuhlwanyela ngokwekhalenda lokuhlwanyela inyanga ngoJanuwari 2017. Ngezikhathi zokushisa okukhulu okushisa, izihlahla kanye nezihlahla kumele zivikeleke ukuze zingabikho. Kodwa zonke izinqubo ze-horticultural ezibalwe ngenhla zenziwa kahle ngokucabangela izinsuku ezihle nezinhle. Ukuze zingalimazi izitshalo zendlu, kanye nezitshalo nezithombo endaweni yokushisa, kubalulekile ukugcina izinyathelo zokuphepha nokudlula izinsuku ezingenakulungiswa kulekhalenda yokuhlwanyela inyanga ngoJanuwari 2017. Phakathi kwazo kukhona: 6, 12-14, 27, 28. Ngesikhathi esifanayo, singakwazi ukuqapha izinsuku ezimbalwa ezifaneleke kuzo zonke izinhlobo zomsebenzi. Lokho - 3, 4, 7-11, ngoJanuwari 15-25.
NgoJanuwari 2017: Ikhalenda lokuhlwanyela kwamaLunar ye-horticulturist kanye nomgadi wensimu
Bonke abasebenzisa iholide kanye nabaninikhaya bayazi ukuthi ikhalenda yokuhlwanyela inyanga ye-gardener ye-horticultural ngoJanuwari 2017 yenza lula ukukhethwa kwezinsuku ezifanele zokutshala izitshalo, kubonisa izinsuku ezinhle kakhulu nezinhle zokutshala, ukukhetha, ukuchelela nokutshala izitshalo. Kodwa ulwazi abalimi-abalimi-iloli kubalulekile njengetafula lokuhlwanyela. Phela, kunezinhlayiya eziningi, ngaphandle kwalokho kunzima ukukhulisa isivuno semfanelo. Isibonelo, imbewu yezinhlayiyana igcina ubuhle obuhle kuphela ngonyaka wokuqala. Izinhlobo ezihlukahlukene zembewu kufanele zihlwanyelwe ezitsheni ezihlukene ukulandelela isikhathi sokuphuma kwelanga. Ngenxa yokungabi khona kwemini, izithombo zidinga umthombo owengeziwe wokukhanyisa. Futhi noma yikuphi ukushintshashintsha kwezinga lokushisa kungabhubhisa amahlumela ashubile kunanoma yikuphi "umlenze omnyama". Uma ngabe lezi zinhlupho zijwayele kakade kuwe, zikhululeke ukuqala ukutadisha ikhalenda yezinyanga zenyanga ye-horticulturist and gardener ngoJanuwari 2017.
UJanuwari 1 - ukufakelwa kabusha nokuhlwanyela akukhuthazwa
NgoJanuwari 2 - ukuhlwanyela imifino nemifino ezindaweni zokugcina izithombo kanye nasefesiteleni
NgoJanuwari 3 - ukunakekela izitshalo zasendlini
NgoJanuwari 4 - ukuchelela, ukukhulelwa
NgoJanuwari 5 - ukulawulwa kwezinambuzane zezitshalo zangaphakathi
NgoJanuwari 6 - ukutshala imifino ukukhula endaweni yokushisa noma endlini
NgoJanuwari 7 - ukusetshenziswa kweziqu eziphilayo
Januwari 8 - ukufakelwa kabusha nokuhlwanyela kwezitshalo zangaphakathi
NgoJanuwari 9 - ukulwa nezinambuzane ezisemhlabeni
NgoJanuwari 10 - ukukhishwa kwenhlabathi
NgoJanuwari 11 - ukuhlwanyela imifino yokukhula endaweni yokushisa
UJanuwari 12 usuku olubi
NgoJanuwari 13 usuku olubi
NgoJanuwari 14 usuku olubi
NgoJanuwari 15 - ukukhulelwa, inhlabathi ivusa
NgoJanuwari 16 - ukulawula izinambuzane zenhlabathi
NgoJanuwari 17 - ukutshala kwezimbali ezinamaqabunga, ukutshala kwemvelo
NgoJanuwari 18 - izimbali ezikhulayo, zikhulula inhlabathi
NgoJanuwari 19 - izimbali ezikhulayo, zikhulula inhlabathi
NgoJanuwari 20 - ukufakelwa kabusha, ukutshala kwezitshalo zangaphakathi
NgoJanuwari 21 - ukufakelwa kabusha, ukutshala kwezitshalo zangaphakathi
NgoJanuwari 22 - ukukhululeka kwenhlabathi
NgoJanuwari 23 - ukulwa nezilokazane ezisemhlabeni
UJanuwari 24 - ukusetshenziswa kwama-fertilizer
NgoJanuwari 25 - ukufika ngezinhlamvu
NgoJanuwari 26 - ukufika ngezinhlamvu, ukulawulwa kwezinambuzane
NgoJanuwari 27 - usuku olubi
UJanuwari 28 usuku olubi
UJanuwari 29 usuku olubi
NgoJanuwari 30 - ukuhlwanyela imifino noma imifino ebunzini lokushisa ebusika noma efasiteleni
NgoJanuwari 31 - ukusetshenziswa kwamanyolo, ukunisela
Uma kungcono ukuhlwanyela utamatisi (utamatisi) ngezithombo ngokulandela ikhalenda yokuhlwanyela kwamaLunar ngoJanuwari 2017
Ithonya ebusuku likhanyisa inhlalakahle yomuntu njalo lijabule imicabango nemicabango yabantu ososayensi abanolwazi. Kodwa imfihlakalo enkulu kunazo zonke kubo yayingumthelela wenyanga phezu kwezitshalo, ezibandakanyeka kakhulu emkhatsini omude wezimo zemvelo. Ucwaningo oluqhutshwa emhlabeni jikelele luye lwaveza umphumela ongathí sina: Ngenyanga ekhulayo, ama-juice aphilisa impilo aphakama engxenyeni yezitshalo, lapho ewela emmpandeni. Noma yiziphi izinguquko ezincane ezithinta futhi zithinte ukukhula kwezitshalo, njengangaphambili, zifakwe ekhalendeni lokuhlwanyela inyanga ngoJanuwari 2017. Akumangazi ukuthi ngisho nokuhlwanyela utamatisi ojwayelekile ngezimbewu kunesikhathi esihle futhi esibi phakathi nenyanga. Empeleni, uJanuwari kubhekwa ukuthi kufanelekile ukuhlwanyela kuphela lezo zinhlobonhlobo zezotamatisi esivele sezifakelwe ukushisa okushisa ngo-Mashi-Ephreli. Izinsuku ezimnandi - 6, 10, 30 kuJanuwari. Zonke ezinye izinhlobo (ubude, ukuvuthwa kokuqala, okunamathele, ama-hybrid) kumele zitshalwe ezitshaleni ekupheleni kukaFebruwari - ngo-Mashi. Ungakhohlwa ngokubaluleka okubalulekile kokuhluma kwetamatisi. Lapho nje ilanga lokuqala livela, inhlabathi idinga ukuqiniswa. Ukunisela kuvame ukuhlanganiswa nokugqoka okuphezulu, futhi ukutshala kabusha izibonelo ezithile eziqukathweni ezithe xaxa ngemva kwezinsuku ezingu-18-20.
Ikhalenda leMbewu Lunar: Ithebula ngoJanuwari 2017
Noma yikuphi ohlala ehlobo owaziyo futhi othanda umsebenzi wakhe uyoqinisekisa: izinga kanye nokulingana kokuvuna akuncike ekunakekeleni, ukulungiswa kwenhlabathi kanye nokukhethwa kwamanyolo, kodwa futhi ngesikhathi sokuhlwanyela kwezitshalo, ukutshala, ukuchelela nezinye izitshalo nezensimu. Phela, ithonya lenyanga lishintsha usuku nosuku. Ekuqaleni, umzimba wasezulwini ugqugquzela ukukhula kwamasiko, ngakho-ke okungafani. Ngezikhathi ezinjalo, uhlelo lwempande luqala ukwanda. Singakwenza kanjani ngaphandle kwekhalenda yokuhlwanyela kwenyanga etafuleni ngoJanuwari 2017? Ayikho indlela! Ngokuthembela kolwazi olutholakala yizifundo eziningi, izazi zezinkanyezi zanamuhla zine-agrarians zakha itafula eningiliziwe ngeziqondiso eziqondile kanye namanothi. Kulula ukuqonda nokuqondisa ngisho nomqali. Etafuleni lamanje, inyanga yonke ka-2017 ifakwe ngophawu lwezinsuku ezifanele zokuhlwanyela nokutshala kwezitshalo ezithile. Bheka ngokwakho! Ikhalenda lokuhlwanyela kwenyanga etafuleni likaJanuwari nezinyanga ezisele zika 2017 kunikezwe ngezansi.
Khumbula: isimo sezulu esingajwayelekile senza izinguquko zayo ngokuzenzekelayo ekhalendeni lokuhlwanyela ngoJanuwari 2017. Sebenzisa isimiso "sasezulwini" sabalimi-balimi abanengqondo. Ekunqumeni izinsuku ezihle futhi ezingathandekayo, ungaqondiswa hhayi kuphela etafuleni, kodwa futhi ngokwakho nokwaziswa kwakho. Kulesi simo utamatisi wakho, ukhukhamba kanye nezinye izitshalo ezitshalwe ezitshalweni ziyokwenza isivuno esiphundu kunazo zonke.
Indoor Croton plant: ukunakekelwa, izifo
Izimbali nezindwangu zokuhlobisa nezitshalo
Ikhalenda leMbewu Lunar kaFebruwari 2018 lomlimi wezandla zasendle, i-horticulturist ne-florist
Izitshalo ezilimazayo zasendlini
Okuyingqayizivele yezifiso ezikhulayo zama roses
Isixazululo sezinkinga zomhlaba zesikhathi sethu: ifilosofi
Indlela yokuzijabulisa ngayo indoda
Izindlela zokuthuthukisa ukucabanga ezinganeni zasenkulisa
Isobho se-pumpkin ukhilimu
Ungayisebenzisa kanjani isikhathi sakho samahhala nomthandi wakho?
Ama-eggplant agcwele umzala
I-best steak zokupheka
Kungani singazi ukuthi singaphika abantu nokuthi singafunda kanjani
Ungagcina kanjani umbono wakho ngenkathi usebenzisa ikhompyutha?